Digital Accountant (Accounting Solutions) - Business Centric Network (BCN)
Accounting, Business, Success
Digital Accountant (Accounting Solutions)
October 22, 2018 October 21, 2018 San Thida
??️Digital Accountant ဆိုတာ Business Centric Network ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။
?‍?လက်ရှိ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေပြီး ?စာရင်းဇယားတွေကို ?✍️စနစ်တကျမှတ်သားချင်သူတွေအတွက်ပါ။
ကိုယ်တိုင် စာရင်းဇယားတွေ သွင်းချင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းသွင်းတဲ့ အခါမှာ ?အခက်အခဲ ကြုံနေတဲ့သူတွေအတွက်၊ စာရင်းဇယားတွေကို သိချင်တဲ့ ⏲️အချိန်မှာ ကြည့်ဖို့အတွက် လိုအပ်သူတွေအတွက်ပါ။
?‍?Digital Accountant ကဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ကို အသုံးပြုကာ
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ?လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမည့် ?စာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ပေးခြင်း
စာရင်းဇယားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထည့်သွင်းပေးကာ ?စာရင်းရှင်းတမ်းများ၊အစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ်ကြေး ?၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်ကနေစတင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
❔ဘာကြောင့် Business Centric Network Company Limited @ BCN ရဲ့ Digital Accountant ကိုရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ။❔
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ?လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ? စာရင်းဇယားများကို ✈️အချိန်အခါနှင့် နေရာဒေသမရွေး ⌚ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ?ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ?ပိုမို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံများရှိပြီး၊ IT ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် Product Consultant(Accounting Software) အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊လက်ရှိChief Accountant အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများမှ ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အား လုပ်ငန်းပိုင်း၊ စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကို ပေါင်းစည်းကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါတယ်။
MSME များအတွက် One Stop Service ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာရွေးချယ်လိုက်ပါ။
အခုပဲ 09977160671 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
??️Digital Accountant ဆိုတာ Business Centric Network ရဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှထေဲက တဈခုပါ။
?‍?လကျရှိ လုပျငနျး လုပျကိုငျနပွေီး ?စာရငျးဇယားတှကေို ?✍️စနဈတကမြှတျသားခငျြသူတှအေတှကျပါ။
ကိုယျတိုငျ စာရငျးဇယားတှေ သှငျးခငျြပမေဲ့ တကယျတမျးသှငျးတဲ့ အခါမှာ ?အခကျအခဲ ကွုံနတေဲ့သူတှအေတှကျ၊ စာရငျးဇယားတှကေို သိခငျြတဲ့ ⏲️အခြိနျမှာ ကွညျ့ဖို့အတှကျ လိုအပျသူတှအေတှကျပါ။
?‍?Digital Accountant ကဘာလုပျပေးမှာလဲ။
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ကို အသုံးပွုကာ
လူကွီးမငျးတို့ရဲ့ ?လုပျငနျးနဲ့ကိုကျညီမညျ့ ?စာရငျးခေါငျးစဥျမြားသတျမှတျပေးခွငျး
စာရငျးဇယားမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ ထညျ့သှငျးပေးကာ ?စာရငျးရှငျးတမျးမြား၊အစီရငျခံစာမြား ပွငျဆငျပေးခွငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
လစဥျကွေး ?၁၅၀,၀၀၀ ကပျြကနစေတငျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
❔ဘာကွောငျ့ Business Centric Network Company Limited @ BCN ရဲ့ Digital Accountant ကိုရှေးခယျြသငျ့ပါသလဲ။❔
လူကွီးမငျးတို့အနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ ?လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ ? စာရငျးဇယားမြားကို ✈️အခြိနျအခါနှငျ့ နရောဒသေမရှေး ⌚ကွညျ့ရှု့နိုငျခွငျး တို့ကွောငျ့ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ ?ဆုံးဖွတျခကျြမြား ခမြှတျရာတှငျ ?ပိုမို အထောကျအကူဖွဈစမေညျဖွဈပါသညျ။
ကိုယျပိုငျလုပျငနျးလုပျဆောငျမှု အတှအေ့ကွုံမြားရှိပွီး၊ IT ပိုငျးဆိုငျရာကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားနှငျ့ Product Consultant(Accounting Software) အတှအေ့ကွုံရှိပွီး၊လကျရှိChief Accountant အဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျနသေူမြားမှ ဦးစီးလုပျဆောငျနတောကွောငျ့ လူကွီးမငျးတို့အား လုပျငနျးပိုငျး၊ စာရငျးပိုငျးဆိုငျရာအတှအေ့ကွုံမြားကို ပေါငျးစညျးကာ ပိုမိုကောငျးမှနျသော အကွံပေးဝနျဆောငျမှုမြား ပေးနပေါတယျ။
MSME မြားအတှကျ One Stop Service ပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျဖှဲ့စညျးထားသော အဖှဲ့အစညျး တဈခု ဖွဈလို့ ယုံကွညျစိတျခစြှာရှေးခယျြလိုကျပါ။
အခုပဲ 09977160671 ကိုဆကျသှယျလိုကျပါ။
Previous postAccounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books Powered by BCN
Next postThe Role of Accounting